“အတွေးစလေးတွေ”: “ ထားဘို . . . ”
Posted by Han Kyi at 7:13:00 am
28 February 2014 at 07:39
ကျနော်ကတော့ ထားဘိုလေးနောက်ကွယ်က သဘောသဘာဝလေးတော့ ကျနော် နည်းနည်းမြင်ရတယ် ဆရာ...။
ရံဖန်ရံခါကျနော်ဆီ ဆရာ လာတိုင်းစိတ်ထဲက အခါခါ
သုတရသ အရသာကင်းတဲ့နေရာလေးမို့ ကိုယ့်ဆီလာရင်အာနားရပါတယ် ဆရာ...့ဟီးးးးး။
ည အိပ်ယာဝင်ခါနီး 'ကြောက်ဖား' ထားဘိုအကြောင်းဖတ်ရင်း ချီလီလေးကို သတိရသွားတယ်...ဖုန်းနဲ့ဖတ်တော့ အခုမှကွန်မန့်ဝင်ပေးဖြစ်တယ် ဆရာဟန်ရေ...
လူနဲ့အနေနီးပြီး လူတစ်ယောက်လို နားလည်သိတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေဟာ ဘ၀ကူးကံခေခဲ့ကြတာမို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ တီတင့်အိမ်က သေသွားတဲ့ ကြောင်မလေး ညိုမီနဲ့ ခွေးကလေး ဂျက်ကွာတို့လဲ သူ့တို့ရဲ့ လူတစ်ယောက်လို လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ မယုံနိုင်စရာကိုပါပဲ...
အင်း.. ဆရာဟန်တို့ လက်သံပြောင်ချက်ကတော့ မျက်စိထဲတောင် အကွင်းအကွင်းမြင်ပါလေရော။ ထားဘိုတို့ အုပ်စုကို ပြောပါတယ်။
ခွေးဟောင်သံ မကြားရတာလဲ အတော်ကြာပြီ ဆရာဟန်။ ခွေးဟောင်သံ ညံနေတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို လွမ်းလှပါဘိဗျာ။း)
ဆရာဟန် လက်သံပြောက်ချက် ထားဘိုကို မျက်စိထဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင် ရေးတတ်တယ်..ထားဘိုအကြောင်းဖတ်ရင်း မိုချီကြောင်မကိုချီရင် နတ်စုက ပြေးလာပါရော...အတော်မနာလိုတဲ့ခွေး...ပြန်လာရင် အမြီးနှန့် ပြီး ဝမ်းသာအားရအူပြီး ဖားတတ်လိုက်တာ...ထားဘိုးအကြောင်း နောက်ဆက်တွဲလေး ဖတ်ချင်သေးပါရဲ့ ...
အမြဲလို လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ဆရာဟန်ကြည်.
အခြေအနေအရ ကော်မန့်က ပေးလို့မရတာ နားလည်ပေးပါ။ သမီးက လိုက်ရှုပ်တတ်နေပီမို့ပါ။
မွေးလာတဲ့ အချိန်ကနေ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျတဲ့အထိ စုံစေ့နေအောင် ဖွဲ့ထားတဲ့ ထားဘိုအကြောင်း ဖတ်ရတာ နားထဲမှာ ခွေးဟောင်သံတွေ တဝုန်းဝုန်းတောင် ကြားလာမိတဲ့ အထိ….၊း)
နောင်နှစ်များမှာ ဒင်းတို့မိသားစု တိုးပွား၊ ဝေစည်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒများတောင် ပြုမိပါရဲ့ ဆရာဟန်ရေ…။
ခွေးနဲ့ကြောင်ကိုချစ်တတ်တဲ့ကျွန်မကတော့ ထားဘိုလိုခွေးမျိုးတွေ့ဖူးတယ်ဆရာ သူတို့လေးတွေဖားလဲဖားတတ်တယ် မနာလိုလဲဖြစ်တတ်တယ် သခင်ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ တချို့ကသတ္တိ ပြတတ်ကြတယ်
ခွေးကိုအရမ်းချစ်တတ်လို့ ထားဘိုလေးကို စာဖတ်ရင်းနဲ့လည်း ချစ်မိနေလေရဲ့...
3 March 2014 at 21:05
ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့နေနိုင်ရင်တော့ ခွေးတစ်ကောင်မွေးမယ်စိတ်ကူးထားပါရဲ့ ဆြာဟန်ရေ
LA MIN AUNG said...
ဆရာဟန်ရေးးးး မကြာမကြာလာဖတ်ဖြစ်သဗျ… blog မှာလဲ postတွေတင်ပေးပါဦးဗျ